Abanikazi abaninzi beekati abazicingeli ukuba ukuze isilwanyana sazo siphile ubomi obude obuzeleyo, kufuneka siqinisekise ukutya okufanelekileyo. Uninzi lwabaphathi bajwayele ukondla iikati ngokuzidla. Ukwenza oku kungavunyelwanga ngokuthe ngqo, iikati zichasene kakhulu kweemveliso ezivela ekudleni komntu, aziyizifo eziphathekayo zokutya. Ukondla iikati ngokutya kwitheyibhile yabantu kubangela ukuba isilwanyana sinezifo zesisu, amathumbu, isibindi kunye neentso. Kule nqaku siza kuthetha malunga nokutya kwekati: ukutya kwekati.
I-Genetic predisposition to food
Iikati ziyizilwanyana, ziqulethe isistim somzingeli, ngoko inyama kufuneka ibangelwe ekudleni kwayo. Ngokwemvelo, ikati idla ixhoba layo lonke - kunye neenwele, iintsiba, amathambo kunye neensila. Kule meko, izicubu ezixhamlayo kunye nokutya okungenakunyakalala ukusuka esiswini seentonga kunye neentaka-iinkozo, amajikijolo, izithelo, utshani, ukungena emzimbeni wesilwanyana kunye nomzimba. Kule meko, iprotheni, equlethwe kwinyama, ikati ifumana kwifom ekhusiweyo, yemvelo, kunye ne-carbohydrates kunye namavithamini, eziqulethwe kukutya kunye nokutya kwezityalo-kwifom echanekileyo. Ngenxa yoko, iikati ezizaliswayo zithandwa ngokutya, okusanhlamvu kunye neziqhamo. Ukuze isilwanyana siphele kwaye siphilile, kufuneka sondliwe ngokutya kwendalo okanye ukutya okhethekileyo.
Ukutya ngokwemvelo kukutya okulungileyo kakhulu kweekati. Ukuxhamla ngokusemgangathweni kokutya kwendalo yindalo ephakamileyo yokuphila kunye nempilo enamandla yekati, ukungonakali kukubunzima ekufezekiseni ukulinganisela nokujonga ubungakanani.
Icandelo eliphambili kwimenyu yekati yasekhaya kufuneka ibe yinyama - intaka okanye inyama yenkomo. Izithako ezongezelelweyo zizolimo nezityalo. Isidlo kufuneka sinikezwe ngefom ekhusiweyo nephekiweyo. Ngokwemveliso yenyama, unokupheka i-porridge - buckwheat, i-oatmeal, ilayisi, ibhali. Inyama ebomvu kufuneka ikhutshwe ngamanzi abilayo, ukwenzela ukuba ikati ayifumaneki i-helminths. Inyama kufuneka ibe yi-fat fat and without bones. Amathambo ayinakunikwa nayiphi na indlela - ayonakalisa okanye ayivale ipheshana lokutya.
Imifuno iyadingeka ukuba ikati ibe nomsebenzi ozinzile we-intese kunye nokuveliswa kwamavithamini. Ezinye iikati ziyakuthanda ukuzithoba ngeenqatha eziluhlaza, iibhotile, ukhukhamba okanye iklabishi, kuhle kakhulu. Kodwa, njengomthetho, abameli be-feline bayenqabileyo yokutya imifuno eluhlaza, kwiimeko ezinjalo kufuneka bongezwe kwipuni. Kwakhona kunceda ukondla ikati kunye nemifuno kunye nezolimo ezihluma.
Ukufumana umthombo owongezelelweyo weprotheni, iikati kufuneka zondliwe ngeemveliso zobisi ezimuncu kunye namaqanda. Njengomthetho, amakati adonsa i-fat-cottage cheese ephantsi, i-kefir kunye ne-yoghurts ngaphandle kwezibonelelo. Ubisi lubalulekile kwiikiti, kodwa izilwanyana ezindala azifanekanga ngenxa yezinto ezibangela ukugaya ukutya. Nangona kunjalo, ukuba isilwanyana senu sithatha le mveliso kakuhle kwaye siphuza ubisi ngokuzonwabisa, ngoko akudingeki ukuba uyilahle le mihlali.
Ukutya okugqityiweyo kungaphantsi kokutya kwendalo, kodwa kusindisa ixesha kunye nomthombo wamacandelo alinganisiweyo. Ukukhethwa kokutya kweekati kufuneka kuhanjiswe kakhulu, kuba i-fodders ephantsi kunye nexabiso elincinci lingalimaza ikati kwaye iqhubise izifo ezinzulu. Ukuba ukhethe ukondla okwenziwe ngokufanelekileyo, ngoko akukho ndawo yokugcina, akufanele ukondle isilwanyana sakho kunye nefowuni yeklasi kunye ne-fowder. Kungcono ukumisa ukhetho kwi-premium foods. Ixabiso labo liphezulu kakhulu, kodwa liqulethe yonke into efunekayo kwaye iluncedo kwikati, abanakho izithako zokunambitheka kunye nama-agent agent. Ukutya okunjalo kuveliswa ngohlobo lokutya okumanzi, ukutya okumanzi kunye nesithambileyo. Kukho ukutya okuphambili kwe-premium, kufuneka bakondle kuphela ezo zilwanyana ezithatha inxaxheba kwimincintiswano kunye nemiboniso, zinefuthe elihle kwimbonakalo yeekati. Nangona kunjalo, akunakwenzeka ukondla iiklasi ze-premium ixesha elide, njengoko ziqhuba umthwalo omkhulu kwiinkqubo ze-excretory zomzimba kwaye zinokukhupha izifo.
Iimveliso ezingavumelekanga zokutya iikati
Ngaphandle kwesiganeko kufuneka unike ukutya okuthosiweyo, okusemathinini, ukutya okukhethiweyo ukusuka kwitheyibhile yabantu kunye neekati, kunye nosawoti kunye nexesha elinobuqho.
Ubhontshisi obuqhathaniswayo, ingqolowa, ingulube, intlanzi eluhlaza, iimveliso zokubhema, iilekese.
Iikati ziyakuthanda ukutya kwaye zicela ukudla kwitafile yomnini, kodwa akufanele uhambe kwaye uziphathe ngokubhekisele kwizinto ezinjalo - ityuwa, iziqholo, i-seasonings kunye nezilondolozo ezibangelwa ukuphazamiseka kokugaya, isisu, iinjongo, isibindi nezinye izitho. Imifuno - iifayi, iimbotyi kunye neengqungquthela, ingqolowa, iimveliso zokubhaka, ishukela kubangele ikati ukudibanisa kwegesi zamathumbu (intlupheko), intliziyo ye-intestinal, ukunyameka kwentliziyo.
Amakati athanda kakhulu iintlanzi, kodwa akuzona kubo ukutya okulungileyo. Iintlanzi ezirhoxayo zivela kumshukela. Abagqirha bezilwanyana baqhagamshelana ngqo ne-urolithiasis kunye neentlanzi kunye neelwandle. Ukongezelela, i-intonance yeentlanzi kwimenyu ye-feline ibangela ukungabikho kwe-vitamin K, okubangela ukuba i-coagulability yegazi ihlupheke kwaye ihlaselwe yinkqubo yokunciphisa i-oxidation yomzimba. Kungcono ukunika iintlanzi eziphekiweyo okanye ezitshiweyo. Ngamanye amaxesha unokwenza umhlobo wakho onamaqhina amane aneentlanzi eziluhlaza, kodwa uqobo olwandle kwaye luthande, ngaphambili lwahlula amathambo nesikhumba.
Ikati akufanele inikwe isibindi. Inyosi yenkuku kunye nenkukhu iqukethe iivithamini ezininzi kunye no-D, ukugqithisa kwabo kungabangela umonakalo kwimpilo yekati kwaye kubangele i-hypervitaminosis.
Akukhuthazwa ukunyusa isilwanyana ngexesha elifanayo kunye nemveliso yendalo kunye nokutya okulungiselelwe, oku kubangela ukungalingani okunamandla kwezondlo.
Ukuba uyayilandela yonke imithetho echazwe, isilwanyana sakho siya kuba nempilo enhle kwaye ibonakale kakuhle, iya kuba namandla kwaye ijabulise, kwaye ubomi bakhe buya kuba bude kwaye buzele. Nangona kunjalo, kufuneka kukhunjulwe ukuba ikati nganye ineempawu kunye neempawu zokutya. Yintoni efanelekileyo kwisilwanyana esinye sinokuphikisana kwenye. Yiba nexanduva lokwakheka kokutya kwekati kwaye ugweme ukukhuluphala nokutya.
Ziziphi iintlobo zama-kittens ezithandwa kakhulu?
Uhlobo lwezinja zikaSheltie
Iimpawu zohlobo lwe-Welsh Corgi Cardigan
Indlela yokunyamekela i-chinchillas
Iholide zonyaka omtsha kubantwana abancinci
Iindlela ezili-10 zokuzonwabisa ubomi
Iindlela zokondla zokudla
Umxholo wekhalori ophantsi wegrapefruit
Iiprotheni kumchamo ngexesha lokukhulelwa
Inkomfa yeendlela ezizodwa zokuqeqesha ngokomzimba